Nagu saabsan | Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd.
Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd. waa soo saare shirkadeed oo ku hawlan beeraha qurxinta Kirismaska ​​in ka badan 10 sano, oo leh warshad u gaar ah oo ku taal magaalada Xiamen, Gobolka Fujian Shiinaha.
Suuqa ugu weyn waa Waqooyiga Ameerika, Galbeedka Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Ruushka iyo Australia.
Xubnahayaga kooxda xirfadeed waxay leeyihiin khibrado hodan ah oo ka imaaday nashqadeynta wax soo saarka iyo wax soo saar ilaa gaarsiin.
Barnaamijkeennu waa mid caadadiisu marka hore tahay, oo marka horena tayo leh.
Waxaan ku guuleysanay BSCI Audit-ka warshadeena, waxsoosaar walbana waxaa lagu xaqiijin doonaa macaamiisha kahor intaan lasoo saarin, talaabo kasta oo wax soo saar ah si adag ayaa loo waafajiyaa heerarka, iyo kormeer buuxa inta aan la xirxirin.
Dhammaan alaabooyinka waxaa loo gudbin doonaa imtixaanka tayada, shahaadooyinka la xiriira iyo warbixinnada imtixaanka ayaa la bixin doonaa.
Awoodeena kobcinta alaabadayada xoogan oo ku saleysan naqshadeeyaasheena wanaagsan iyo in ka badan 100 shaqaale si wanaagsan u tababaran; waxaan u soo saaraynaa waxyaabo cusub iyadoo loo eegayo isbeddelka suuqa rubuc kasta, iyo uruurinta ballaaran ayaa loo heli karaa xulashooyinkaaga.
Waxaan kaqeyb galnay carwooyin badan oo guriga iyo doomaha ah sanadkasta, waxaad kaheli kartaa inta badan fikradaha soo socda.
Nala shaqee, waad ku raaxeysan doontaa adeegga iibsiga HAL-JOOJI annaga ayaa iska leh.
Adigu waad guuleysaneysaa annaguna waan guuleysaneynaa waa halheyskeenna
Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto, oo waxaan rajeyneynaa booqashadaada iyo muddooyinka dheer ee iskaashiga nala wadaagaya.